ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်မှုကို ချပြရဲတဲ့လူတိုင်းအပေါ် အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး | Duwun
LGBT တွေကို Support လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးက LGBT တွေအပေါ် သူမရင်ထဲကလာတဲ့ စကားတွေနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အားပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း LGBT အပေါ် ဝန်းရံသူ တစ်ယောက်ပါတဲ့။
နေခြည်ဦးက သူ့ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းကို ဝန်းရံပေးတဲ့ စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုကို ပေါ်တင်ချပြရဲတဲ့ သတ္တိကိုလည်း လေးစားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကိုတောင် ဒီလူ့ဘောင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ချပြဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကိုပါ ချပြနေတဲ့ လူတွေကို နေခြည် support လုပ်တယ်။ ချစ်လဲချစ်တယ်။ GAY ဖြစ်မှ #LGBT ကို support လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ’’ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ မနက် ၁၂ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှု နဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်နိုင်သူတွေက အမြဲတမ်း အောင်နိုင်သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ နေခြည်ဦးက ပြောပါတယ်။
‘’နေခြည်တို့လို straight ဖြစ်ပေမယ့် #LGBT community တစ်ခုလုံးကို support လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေ အသိုင်းအဝိုင်းမရွေးအဆင့်အတန်းမရွေးမှာလဲ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ
အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေရော ထုတ်ပြချင်ပေမယ့် ထိုးနှက်မှုဒဏ်ကို ကြောက်လို့ မဝင့်မရဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုရောကိုပါ သိစေချင်တယ်။ Stand Up High and Stay Strong I love you for who you are nd i support you just like my family. LET LOVE WINS !!!!!!’’ ဆိုပြီးတော့လည်း ဆက်လက်ရေးသားထားပါသေးတယ်။